Laba haween Soomaali Mareykan ah oo lagu helay dambi ah inay lacago ku taageereen Al-shabaab – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Laba haween Soomaali Mareykan ah oo lagu helay dambi ah inay lacago ku taageereen Al-shabaab
Labo haween Somali Mareykan ah islamarkaana ay dacwad oogayaasha Mareykanka kusoo eedeeyeen inay lacago u uruurin jireen Xarakadda Al-shabaab ayaa xukun ku riday maxkamadda heerka degmadda ee gobalka Virginia ee Koonfur bari ee dalka Maraykanka.
Muna Cismaan Jaamac oo 36 jir iyo Hinda Cisman Dhirane oo 46 jir ah ayaa la sheegay in lagu helay dambi ah inay abaabuleen koox lagu magacaabo (Group of 15), oo ay xubno ka yihiin haween ka kala yimid dalalka Soomaaliya, Kenya, Masar, Holland, Sweden, Britain iyo Canada, sida lagu sheegay caddeyn kasoo baxday xafiiska xeer-ilaaliyaha Mareykanka ee bariga gobalka Virginia.
Baarayaasha ayaa sheegay inay wada-sheekeysi teleefoonka oo ay ka duubeen kooxda gabdhaha 15 inay muujinayso inay xiriir dhow la lahaayeen Xarakadda Al-shabaab, waa sida hadalka loo dhigay.
Sidoo kale, baarayaasha Mareykanka ayaa sheegay inay Muna Cismaan Jaamac iyo Hinda Cisman Dhirane u direen lacago dad ku sugan Kenya iyo Soomaaliya, iyadoo la tuhunsan yahay in lacagtaasi loo sii gudbiyey Al-shabaab, waa sida ay hadalka u dhigeen.
Dhinaca kale, dhowr haween oo la eedeysnaa haweenkaasi ayaa la shegey inay baxsadeen, kuwaasi oo magacyadooda lagu kala sheegay Fardowsa Jaamac Maxamed iyo Bariira Xasan Cabdullaahi.
Sidoo kale, haweeney kale oo lagu magacaabo Farxiya Xasan oo qeyb ka ahayd dacwadaasi ayaa lagu maxkamadeynayaa gudaha dalka Holland.
Ugu damebyntii, Muna Cismaan Jaamac iyo Hinda Cismaan Dhirane oo la xiray bishii July ee sanadkii 2014-kii ayaa la filayaa in markale maxkamadda lasoo taago bisha Janaayo ee sanadka soo socda ee 2017-ka, iyadoo si weyn loo hadal haayo in labadooda ay muteeysan karaan min 15 sano oo xabsi ah.
Warbixinta oo ku qoran Luuqada ENGLISH-ka halkaan hoose ka aqriso